Sebuqala ukusimama ubudlelwano phakathi kwe-Egypt neTurkey - Bayede News
Sebuqala ukusimama ubudlelwano phakathi kwe-Egypt neTurkey
Isithombe: nguMuhammad Hamed/AFP
Izakhamuzi zingase zithole ilungelo lokuzivikela eMyanmar
Izenzo zaseTurkey kumele zikhombise ukuhambisana nemigomo kanye nezinhloso ze-Egypt uma leli lizwe lifuna ukuthi ubudlelwano balo ne-Egypt bubuyele esimweni esejwayelekile, lokhu kushiwo nguNgqongqoshe Wezangaphandle e-Egypt, uSameh Shoukry ngeSonto.
UNgqongqoshe uShoukry uthe kube nokuxhumana phakathi kweCairo ne-Ankara ngemuva kweminyaka yezingxabano phakathi kwabo kepha uphinde waveza ukuthi izingxoxo zibe yisikhathi esilinganiselwe.
Ubudlelwano phakathi kwala mazwe baba nobuhixihixi emveni kokuthi ezombutho zase-Egypt zivukele zakhipha esikhundleni uMengameli uMohammed Mursi, owayenguMengameli wokuqala wentando yeningi kuleli lizwe, aphinde abe ngumngani kaMengameli waseTurkey uTayyip Erdogan kulandela imibhikisho yangowezi-2013.
“Akukho ukuxhumana ngaphandle kohlaka olujwayelekile lokuxhumana. Uma izenzo zeTurkey zangempela zikhombisa ukuhambisana nemigomo kanye nezinhloso ze-Egypt lokho kuzoba yisisekelo sokubuyela ebudlelwaneni obejwayelekile phakathi kwethu,” kusho uShoukry.
Iziphathimandla nezikhulu zaseTurkey ngesonto eledlule zithe ukuxhumana phakathi kwala mazwe sekuqalile futhi i-Ankara isafuna kuqhutshekwe ngokubambisana. UMengameli u-Erdogan uthe ukuxhumana kwabo “bebungekho ezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa bekungaphansi kancane kwezinga eliphezulu”.
Ezobunhloli zase-Egypt zithe iTurkey ibiphakamise ukuthi kube nomhlangano wokudingida ukubambisana. Noma yikuphi ukuncibilika kobudlelwano phakathi kwalezi zikhondlakhondla esifundeni kungaba nemiphumela emibi eMiddle East, lapho iCairo ne-Ankara befuna ukuthonya imicimbi ezindaweni ezibalulekile futhi la mazwe ami ezinhlangothini eziphikisanayo empikiswaneni yezasolwandle yaseMediterranean.
UShoukry uphinde watshela abenzibomthetho ukuthi kube nemiyalezo emihle evela eQatar, ekhombisa isifiso sokuqhubeka nokulungisa ubudlelwano kulandela ingqungquthela ebiseSaudi Arabia e-al-Ula ngoMasingana.
I-Egypt kanye nabalingani bayo baseGulf okuyiSaudi Arabia, i-United Arab Emirates kanye neBahrain bavumelene kule ngqungquthela ukubuyisa ubudlelwano bezokuxhumana, kwezohwebo kanye nakwezokuvakasha neDoha obanqanyulwa ngowezi-2017 ngenxa yezinsolo zokuthi iQatar isekela ubushokobezi, icala eliphikayo.
Anathi Mtaka Mar 19, 2021